UMandawe uthi akesabi muntu kuleli | IOL Isolezwe
UMandawe uthi akesabi muntu kuleli
Isolezwe / 25 May 2012, 10:43am /
UBOITHSEPO Mandawe (kwesokunxele) ebanga isicoco se-welterweight noMbuso Ndlela e--Emperors Palace. Isithombe: GALLO IMAGES
UZISHAYA isifuba ngokungabi nantanga esibhakeleni saseNingizimu Afrika uBoitsepo Mandawe ozolwa impi yokuhlungela isicoco se-SA welterweight ngasekuqaleni kukaJuni.
UMandawe osehlulwe kabili, ngumshayisibhakela oyedwa ezimpini zokuhlungela lesi sicoco, uzobhekana noMthobisi “The Terminator” Buthelezi empini ezoba seSandton Convention Centre, eGoli, ngoJune 2.
Laba bashayisibhakela bazohlungela ukulwela lesi sicoco esishiywe nguChris van Heerden osephethe ese-International Boxing Organisation (IBO) welterweight. Empeleni nguye uVan Heerden oseliphazamise kwaze kwaba kabili iphupho likaMandawe lokulwela lesi sicoco njengoba amehlula ngo-2009 nanyakenye.
“Akekho umshayisibhakela ongangishaya eNingizimu Afrika,” kusho uMandawe yize ake washaywa nguVan Heerden.
Kungenzeka ukuthi uMandawe ugcwele ukuzethemba ngoba engasekho uVan Heerden kubashayisibhakela angase abange nabo isicoco nokunguye yedwa osamehlulile selokhu aqala isibhakela esikhokhelayo ngo-2007.
“Ngisho naye uVan Heerden uyazi ukuthi empini yethu yokugcina ngangimshayile kodwa amajaji azisholo okwawo. Angimesabi uyakwazi lokho,” kusho uMandawe ogcizelele ukuthi leli yithuba lakhe lokubeka izandla zakhe ebhandeni ayekade eligaqele.
Ozonqoba phakathi kukaMandawe noButhelezi bekufanele abhekane noTsiko Mulovhedzi owagingqela uSicelo Mzobe ongafikanga empini yokuhlunga kodwa kungahle kushintshe konke lokho. Kuvele ukuthi uMulovhedzi usevume ukulwa noNtuthuko Memela waseMnambithi empini engamlahlekisela ngethuba lokulwela isicoco. Kungenzeka ibhande ligcine libangwe nguMemela nozonqoba phakathi kukaMandawe noButhelezi uma uMulovhedzi egcina eyithathile le mpi acushelwe umgoga ngayo.
Njengokujwayelekile, ngesikhathi ekhuluma naleli phephandaba uMandawe ubengaliphathi elokuthwala ubunzima kule mpi umphumela wayo obhekwe ngabantu abaningi.
“Anginalo noluncane uvalo ngale mpi, ngikhululekile. Ngizomfundisa isibhakela uButhelezi. Ngizomlinda nje ngimbone ukuthi uphetheni bese ngiyamgingqa,” kusho uMandawe.
Ngakolunye uhlangothi uButhelezi oqeqeshwa nguPeter Smith, ngeke athathwe kancane njengoba esahlulwe kanye ezimpini ezingu-12 kanti uMandawe usahlulwe kabili kwezingu-11.